FollowUpThen: Mampatsiahy ny mailaka maimaimpoana | Martech Zone
Alarobia, Martsa 25, 2015 Alatsinainy Aprily 25, 2016 Douglas Karr
Tiako ny mizara fitaovana famokarana vitsivitsy izay ampiasaiko hitantanana ny fidiran'ny mailaka be. Herintaona lasa izay, nanoro hevitra aho (ary mbola mampiasa) Evercontact izay manadihady ny sonia mailaka hanavaozana ny antsipirian'ny fifandraisana. Efa ho roa taona lasa izay, izaho nizara Unroll.me - rafitra lehibe mbola ampiasaiko izay manangona sy manangona mailaka amin'ny mailaka tokana mba hampihenana ny tabataba.
Androany, mizara aho FollowUpThen. Ity misy ohatra tsara iray amin'ny fampiasako azy. Miara-miasa amin'ny prospect na client izahay ary mandefa mailaka amiko izy ireo ary mampahafantatra ahy fa te hifandray amiko izy ireo saingy hivoaka ny tanàna izy ireo na hamita tetikasa. Manontany izy ireo raha afaka mikasika ny fototra aho afaka roa herinandro.
Tsy misy olana, alefako ilay mailaka 2weeks@followupthen.com. FollowUpThen avy eo mandahatra ny mailaka hiverina amiko 2 herinandro taty aoriana. Tsy misy fampahatsiahivana napetraka ao amin'ny kalandrie na manampy asa hafa ao amin'ny lisitry ny laharako… 2 segondra monja handefasana ilay mailaka.
FollowUpThen na dia mahatonga azy io ho tsotra aza amin'ny famaliana ny fisoratanao voalohany amin'ny mailaka Reply To All izay manampy ny mailaka fahita indrindra izay hampiasanao. Amin'ity fomba ity dia mipoitra ao amin'ny solo-soloanao ny mpanjifanao mailaka!
Manomboka mampiasa FollowUpThen, manoratra mailaka fotsiny dia ampidiro [amin'ny fotoana] @ followupthen.com ao amin'ny sahan'ny CC, BCC na TO amin'ny mailakao.
Samy hafa kely ny fomba tsirairay:
mpametraka Mahazo fanarahana momba ny mailaka ianao, fa ny FollowUpThen dia tsy handefa mailaka amin'ilay nahazo azy am-boalohany.
TO Mandefa mailaka ho an'ny tenanao ho avy.
CC Manorata fampahatsiahivana ho anao sy ho an'ny mpandray.
Azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny tranokalany ary mahita ny fampahatsiahivanao miandry! Raha tianao ny fampidirina amina kalandrie, fampahatsiahivana SMS, fitadiavana valiny na te-hametraka ekipa ianao, FollowUpThen manome fonosana amidy lafo vidy.
Tags: fampahatsiahivana mailakafitaovana mailakamanaraka
Apr 1, 2015 amin'ny 9: 48 AM
Ampiasaiko toy izany koa izany ary heveriko fa mahafinaritra. Valiny mora toy izany amin'ny olana miverimberina